I-Artelier Homes "Maison Noir et Blanc 3" 300 sq. ft - I-Airbnb
I-Artelier Homes "Maison Noir et Blanc 3" 300 sq. ft
Lalitpur, Central Development Region, i-Nepal
I-i-loft ephelele ibungazwe ngu-Lumi
Ukukhansela kwamahhala ngaphambi komhla ka-Nov 10.
I-Artelier Homes iqoqo lamahabhu amasiko asendaweni ephakathi, ezitolo zokudlela kanye nemiklamo adlala ngothando ngokunethezeka okwenziwe ngezandla nempilo epholile. Yakhelwe ngobuciko, ubuciko kanye nokudlala, indawo ngayinye yethu yokuhlala ikhethwe ngokucophelela ngesitayela nangomphefumulo ngenhloso yokuthuthukisa Ubuciko bendawo baseNepalese nemisebenzi yezandla ukuze kunikezwe amaciko asafufusa inkundla, futhi aphakamise umphakathi wendawo, ngokubambisana.
I-“Maison Noir et Blanc” ye-Artelier Homes ine-3 Serviced Studio Apartments enendawo yokufunda, ikhishi kanye negumbi lokugezela elinamathiselwe. Siphinde sibe nethala elimbozwe ngokuhlanganyela elinezindawo zokuhlala/ zokudlela ezanele. Itimu yalesi sakhiwo ithi I-Black & White Art; ukuphrinta nobuciko bamalahle obusekelwe kubantu baseNepal.
Usayizi: 300 sq. ft/ 28 sq. m
- I-9 intshi ye-Ultra Premium Luxury Mattress
- 4 imicamelo ukuze uthole ukunethezeka okwengeziwe
- Umshini ongenisa umoya
- Izingubo zokugeza, amathawula okugeza namathawula ezandla
- Ama-slippers egumbi
- Igedlela likagesi
- I-oven ye-microwave
- Isitofu sikagesi
- Izitsha eziyisisekelo, ama-cutleries nezitsha ze-ceramic
-Izinto Zokugeza Zokuthopha
- Ikhofi Netiye Egumbini Lokuthopha
- Amanzi ambiwa phansi
- Hi isivinini Unlimited Wi-Fi
- Ukugcinwa Kwezindlu Kwansuku zonke
- Izinsizakalo ze-concierge (ngesicelo)
- Umshini wokuwasha owabiwe
Imihlobiso yethu ye-wabisabi ihlanganisa ubuqiniso, ithola ukubaluleka kulokho okunesimo sezulu esinothando nokuhlala kukho, futhi ithuthukisa umuzwa wokuthula nokuthula kusetshenziswa ubulula. Kunokuba uhlale ungeza into entsha ecwebezelayo yakamuva noma ugxile ekwenzeni yonke imininingwane iphelele, abamukeli bezinto zangaphakathi ze-wabi-sabi bathola ukuvumelana kobuqiniso nokungapheleli. Indlela enjalo ingase ibe ikhambi obulifuna emhlabeni wethu onesiphithiphithi, nokho ogxile ekupheleleni.
- Ukufanekiswa kwe-Nepalese Artisanal kanye ne-deco yobuciko eyenziwe ngezandla nemisebenzi yezandla.
- Iphalethi yombala we-Minimal Aesthetic & Neutral ukuze ukhuthaze imizwa yokuthula nokuthula.
- Izinto zemvelo nezinto ezivela emvelweni ziyizingxenye eziyinhloko zekhaya lethu le-wabi-sabi, ngenxa yamavayibhu amahle eziwalethayo.
- Uhlose ukugcina izinto ezibalulekile kumoya ozolile nowenjabulo, indlela ekhulisa injabulo nobulula bokuphila kwansuku zonke.
- Izakhi zokuhlobisa eziletha i-nostalgia, ubuhle, usizo, noma inhlanganisela yakho konke.
ubusuku obungu-7 e- Lalitpur
Ngobuciko bobuciko nokuheha kwe-bohemian, i-Artelier Homes iqhelelene nesifunda samasiko sodumo sakwaPatan ezansi ngomgwaqo othi "The Heritage walk", izinyathelo ezisuka eThempelini Legolide kanye neMajestic Patan Durbar Square.
Umsingathi uzotholakala amahora angama-24 mathupha noma ngocingo/i-whatsapp nganoma imiphi imibuzo. Isipiliyoni esingenasici sesivakashi siyinto eza kuqala kithi futhi sizobe senza ngaphezu kwalokho ukuze sifeze lokho.
Izilimi: Nederlands, English, Français, हिन्दी
Hlola ezinye izinketho ezise- Lalitpur namaphethelo